မြိတ်ကိုသွားလည်ရင်းအစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့……….. – FoodiesNavi
ခေတ်စနစ်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေအရ ဒေသန္တရဗဟုသုတ ရှာမှီးနိုင်ဖို့အတွက် နေရာဒေသအနှံ့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေ အများအပြားရှိလာပါတယ်။ ဒီလိုလည်ပတ်ကြရင်းနဲ့ အစားအသောက်အတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားကြရာမှာခေါင်းစားမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကြုံရာဝယ်စားရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒေသတစ်ခုကိုရောက်တိုင်း အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းကို စားရမယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Foodies Navi ကနေ မြိတ်မြို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့သူတွေအတွက် Blue Sky ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Blue Sky ရဲ့လိပ်စာကတော့–
ဆိုင်(၁) ။ ။ No.4The Kwin Food Court, Strand Road , Myeik
ဆိုင်(၂) ။ ။ No.46 Pearl Road , Myeik
ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ကြေးအိုး ၊ ကြေးအိုးဆီချက် (ကြက်၊ဝက်) ၊ တုံယမ်းကြေးအိုး ၊ ဘဲကင် ၊ ကြက်ကင် ၊ အခေါက်ကင်သုပ် ၊ စွန်တန်ဟင်းချို ၊ တုံယမ်းဟင်းချို ၊ တုံယမ်းထမင်းကြော် ၊ ရေခူသုပ် ၊ ကင်းမွန်သုပ် ၊ မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက် ၊ ငါးဆားငံသီးပေါင်း ၊ ငါးသားချဉ်စပ် ၊ ဂဏန်းပျော့ချဉ်စပ် ၊ ဂဏန်းပျော့ကြွပ်ကြော် နဲ့ ဖျော်ရည်မျိုးစုံ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိ သွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအရွက်နဲ့အသားငါးလတ်ဆတ်မှုကြောင့် အရသာကိုအထူးကောင်းမွန်စေပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကြောင့်လည်း စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်မှာပါ။
Blue Sky ကနေ ကြုံတိုင်း Food Delivery Group နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး နေအိမ် ၊ ရုံး ၊ ဆေးရုံ ၊ ကျောင်း ၊ ဘဏ်အသီးသီးက နေ့လည်စာအခက်အခဲတွေအတွက် မနက် (၁၀)နာရီကနေ ညနေ(၄)နာရီအထိ 09 254 434 696 ကိုဖုန်းဆက်ရုံနဲ့ အရောက်ပို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိနေတော့ ကိုယ်တိုင်မသွားရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Menu ကိုဖုန်းဆက်မှာယူရုံပဲနော်။ မြိတ်မြို့အတွင်းဆို ဝန်ဆောင်ခ (၁၀၀၀)ကျပ်ပဲကျသင့်မှာဆိုတော့ အရမ်းကိုတန်တယ်နော်။ မြိတ်မြို့ကိုအလုပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလည်အပတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အစားအသောက်ပြဿနာအားလုံးအတွက် Blue Sky ကိုသတိရလိုက်နော်။
Image Source : www.facebook.com/bluesky
In Restaurant Guides Tagged Kyay Oh, Salads, Ton yan kyay oh Leaveacomment
လျှာပေါ်တင်လိုက်ရုံနဲ့ မလွတ်တမ်းဝါးစားချင်စိတ်တွေ ??? တစ်ဟုန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့်……..